အရက်နှင့်အဆစ် - ကျွန်ုပ်သည် Celebrex သို့မဟုတ် Meloxicam တွင်သောက်ပါကကျွန်ုပ်သောက်နိုင်ပါသလား။ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ပြင်းထန်သောအားကစား ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ရပ်ရွာ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, သတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> ကျွန်ုပ်သည် Celebrex သို့မဟုတ် Meloxicam တွင်သောက်ပါကကျွန်ုပ်သောက်နိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်သည် Celebrex သို့မဟုတ် Meloxicam တွင်သောက်ပါကကျွန်ုပ်သောက်နိုင်ပါသလား။
နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်တောင့်တင်းခြင်း - သင်သည်ဤဘုံလက္ခဏာများကိုခံစားရသည် အဆစ် ? အရ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC), အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရွယ်ရောက်သူ 54 သန်းရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာရှိသည်။ ဒါက4နီးပါး 1 ပါပဲ။
သင့်တွင်ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာသို့မဟုတ်အခြားရောင်ရမ်းသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများရှိပါကသင်၏ဆရာ ၀ န်ကကဲ့သို့ဆေးကိုညွှန်းနိုင်သည် Celebrex (celecoxib) ဒါမှမဟုတ် Mobic (meloxicam) ။ သင်ဤ NSAIDs (steroids anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ကိုအစာနှင့်ယူသင့်ကြောင်းလူအများကသိကြသော်လည်းအရက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
သင် meloxicam နှင့်အရက်ပေါင်းစပ်နိုင်သလား? ဒါမှမဟုတ် Celebrex နဲ့အရက်လား ဆေးပေါင်ပေါင် (OTC) ibuprofen နှင့်အရက်သောက်ခြင်းကောအသို့နည်း။ ဒီဆေးတွေ၊ အရက်တွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေကိုအနီးကပ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ထို့ကြောင့် NSAIDs နှင့်အရက်…ပထမနည်းနည်းနောက်ခံ - ဆေးကောင်တာနှင့်ဆေးညွှန်းပုံစံနှစ်ခုလုံးတွင် - NSAIDs ကိုရနိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော OTC Anti-inflammatory ပါဝင်သည် မင်းသမီး နှင့် ကွမ်းခြံကုန်း (နှစ် ဦး စလုံး ibuprofen ဆံ့), Aleve (naproxen) နှင့် Ecotrin ( Aspirin ကို ) ။
ဆေးညွှန်းဆေးများတွင် ပို၍ အစွမ်းထက်သောဆေးများပါဝင်သည် ibuprofen နှင့် နာတာရှည် နှင့်ကဲ့သို့သောအခြားဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ Celebrex (celecoxib) နှင့် Mobic ( meloxicam ), အခြားသူများအကြား။
NSAID အားလုံးတွင်aအနက်ရောင်သေတ္တာသတိပေးချက် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး (FDA) မှလိုအပ်သည့်အခိုင်မာဆုံးသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ ဒီသတိပေးချက် GI သွေးထွက်ခြင်းနှင့်ဖော်ပြချက်များပါ ၀ င်သည်။ NSAID များသည်ပြင်းထန်သောအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုးကျိုးများဖြစ်သည့်သွေးထွက်ခြင်း၊ အနာများနှင့်အစာအိမ်နှင့်အူသိမ်များပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သတိပေးလက္ခဏာများမပါဘဲဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာများသည်ပြင်းထန်သောအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအတွက်အန္တရာယ်များသည်။ အရက်သုံးစွဲခြင်းအပါအ ၀ င်အချို့သောအချက်များက NSAIDs နှင့်အတူ GI သွေးထွက်နှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည့်သတိပေးချက်အပါအ ၀ င်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များလိုက်နာသည်။
NSAIDs အားလုံးအတွက်ဆေးညွန်းစာသို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းမပါသောမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွင်အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့် GI သွေးထွက်ခြင်းနှင့်အစာအိမ်အနာပေါက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးသည်။
ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာများတွင်သုံးလေ့ရှိသော Tylenol (acetaminophen) ကို NSAID အဖြစ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းမပြုသည်ကိုလည်းမှတ်သားသင့်သည်။ သို့သော် Tylenol နှင့်အရက် ပေါင်းစပ်။ အသည်းပျက်စီးနိုင်သည်။
ချစ်သူ (diclofenac) ကိုပါးစပ်ဖြင့်ရောလိမ်းထားသောဂျယ်လ်ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ခေါင်းစဉ်ပုံစံယခုရရှိနိုင်ပါသည် ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါပဲဝယ်ယူနိုင်သော အဖြစ်ဆေးညွှန်းများကအဖြစ်။ NSAID ဆေး၏မိသားစု ၀ င်များအနေဖြင့်ဆေးများ (ပါးစပ်ဆေးပြားနှင့်လိမ်းဆေးဂျယ်လ်) နှစ်ခုလုံးတွင် GI သွေးထွက်ခြင်းနှင့်အရက်နှင့်ပတ်သက်သောသတိပေးချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။ တူညီသောသတိပေးချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည် Flector (diclofenac) လိမ်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ။ သူတို့ကလိမ်းဆေးကိုသုံးနိုင်ပေမဲ့ဒီဆေးတွေကိုအရက်နဲ့မသောက်သင့်ဘူး။
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း GI သွေးထွက်မှုသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖြစ်ပွားနိုင်သည့် NSAIDs ၏ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သော်လည်း NSAIDs နှင့်အရက်ပေါင်းစပ်ရာတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသည်။ သငျသညျအောက်ပါမဆိုတွေ့ကြုံခံစားလျှင် ရောဂါလက္ခဏာများ , ဆေးကုသမှုခံယူ:
အရက်နှင့်အဆစ် - ၎င်းသည်အကူအညီဖြစ်စေပါသလား။
အရက်သေစာအတွက်အသုံးပြုသည့် NSAIDs များနှင့်အရက်သည်အန္တရာယ်ကင်းစွာပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းအရက်သည်ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာကိုယ်နှိုက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါသလား။ အရက်သည်အဆစ်ကိုရောင်ရမ်းစေသလား။
Cialis vs. Viagra: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်